Intlanzi eleleyo | Ngeentlanzi
El ukuloba iintlanzi ichongiwe njenge-blenny encinci ye Umzimba omde kunye noxinzelelo kancinci. Intloko ineprofayili ethambekele kakhulu emehlweni, ekwindawo ephezulu, ukuya emlonyeni, kwinxalenye esezantsi.
Ngaphezulu kwamehlo inesibini seentente ezilula, inde ngaphezu kobubanzi bamehlo kunye neempumlo zempumlo ezinamasebe amancinci. Umlomo unamazinyo amabini e-canine kunye nomqolo omnye wamazinyo amancinci kumhlathi ngamnye. Umva wokugqibela ubonakalisa isiqingatha sangaphambili siphezulu kakhulu kunesinye, phakathi kweendawo zombini ebonakalayo ebonakalayo emadodeni ashushu.
El Umbala wesiseko uhlala ubu-beige okanye uluhlaza-tyheli ukuba intlanzi ikumazantsi agqunywe yi-algae, ineebhendi ezintandathu ezimnyama ezinqamlezileyo, ezinokwahlulwa zize ziye kufikelela kumva wokugqibela. Ezi bhanti zingqongwe yimigca yombala oluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama ngakumbi emadodeni kunabafazi.
Ukuba intlanzi iphakathi kweembaza, umzimba unombala ongwevu wesilivere kwaye amabhanti ajikelezayo aphantse abe mnyama. Emacaleni entloko, ngasemva kwamehlo, inebala eliluhlaza olujikelezwe ngombala obomvu, ngakumbi ebonakalayo emadodeni.
Indawo abahlala kuyo ihlala ingaphantsi kwemitha ubunzulu, ngokubanzi Ifumaneka kwiibhloko ezinamatye, kunye nohlaza lwengca kwaye ngokulinganayo uyangcangcazela. Oleleyo uyasebenza kakhulu, esitya ii-invertebrate ezincinci kunye ne-algae.
El Iintlanzi zokulala zizala ekuqaleni kwehlobo, kwaye ngeli xesha amadoda abonisa ukunyaniseka okwenyani, alandele kwaye enze inkundla, ngokunyusa ukuphakamisa umva we-dorsal, ehambisa intloko kwelinye icala ukuya kwelinye kwaye ade abethe, naliphi na ibhinqa elidlulayo ngenjongo yokumqinisekisa ukuba ahambe uye esidlekeni.
Ngexesha lokuzalisa abesilisa baba yintsimi kakhulu kwaye iimfazwe phakathi kwabo zihlala zikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Intlanzi eleleyo